Sawiro iyo Warbixin, Soo dhaweyntii Madaxweynaha Puntland maanta loogu sameeyay Boosaaso – SBC
Sawiro iyo Warbixin, Soo dhaweyntii Madaxweynaha Puntland maanta loogu sameeyay Boosaaso
Posted by Webmaster on Noofember 29, 2012 Comments
Waxaa manta siweyn loogu soodhaweeyay Gudaha Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari Madaxweynaha Puntand C/raxmaan Sheekh Maxamed oo kasoo socdaalay Magaalada Carmo oo katirsan Gobolka bari oo uu habeenkii xalay ahaa u hoyday.
Qeybaha Kala duwan ee Bulshada ,maamulka iyo Cuqaasha ayaa siweyn Madaxweynaha Ugu gacanqaaday Duleedka Magaalada Boosaaso iyadoo Wefdiga Madaxweynaha ay Boosaaso kusoo dhaweeyeen msuuliyiin uuhorkacayay Gudoomiyaha Gobolka Bari C/samadMaxamed Galan iyo Duqa Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan.
Shacab kala duwan oo safnaa hareeraha wadooyinka Magaalada ayaa Madaxweyne C/raxmaan kusoo dhaweeyay Caleemo Qoyan Qaarka mid ah Dadkaas aya Xirnaa Dhar kasameysan Calanka Puntland iyo Calanka Soomaalya
Madaxweynaha Iyo wefdigiisa Markii ay gaareen Xarunta Madaxtooyada Boosaaso waxaa u halkaaas kulahaadlay Wariyasha isagaoo kahadlay ugu horeyn imaanshihiisa Boosaaso, uguna mahadceliyay shacabka sidii ay u soo dhaweyeeen.
Dhinaca Kale Madaxweyne Faroole Ayaa waxaa uusheegay inta uujoogo Magaalada Boosaaso u kulamo la qaadan dono qeybaha kala duwan ee Bulshada, Isagaoo sheegay in uu kala hadli Doono arimo kaladuwan oo ay ka mid yihiin siyaasada haatan ee Puntland .
Madaxweynaha aya sidoo kale ka hadlay Nidaamka Ururada Siyaasada Puntland oo uu sheegay inuu muhiimad gaar ah u leeyahay DHalintarada oo uu sheegay in manta ay doorweyn kulahaayeen Soodhaweyntii loogu sameeyay Duleedka Boosaaso.
Khudbada Madaxweynaha Puntland oo uu dhinacyo badan kagahaadlay ayaa waxaa uu kusoo hadal qaaday in dhawaan Maamulkiisa uu sameysan doono Warbaahin Balaaran isagaoo sheegay in ay taaasi kagakaaaftoomi doono Warbaahinada kale eegaarka loo leeyahay oo uu sheegay inay ka shaqeeyaan Arimo aan dan u ahayn Maamulka Puntland.
Madaxweynha Puntland ayaa Maalmaha Soo aaadan waxaa uu joogi doonaa Magaalada Boosaaso isagaoo kulamo kaladuwan oogaaargaaar ah la geli doona qeybaha Maamulka iyo Bulshada Noocyadeeda kaladuwan.
MAdaxweynaha iyo Wafdigii uu horkacayay.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo salaan la dhextagay shacabkii soo dhaweynayay.
Madaxweyne Faroole oo u gacan haatinaya shacabka.
Abwaan Maxamed Dhagaafe Cilmi says:
Noofember 29, 2012 at 3:15 pm
Maanshaa Allaah reer Boosaaso aad ayay u mahadsanyihiin shuushow bax puntland waa is raacday Allow nabada noo daa
sharmarke bile osman coke says:
Noofember 29, 2012 at 3:32 pm
umada cadaadiska halaaga daayo fadlan, afaar qoof inti qoraxda laso istaji walaaso dhaweyay madaxweynaha yala oraan, madaax weynaha hadii uu kalsoniqaabo daadkisa sii cadi aah hau dhaxgalo oo sidii madaxwynayashi kahoreyay oo kale hau dhaqmo hadii kale digteytarnimo mesha halajogo, iyo cabuuris, daadka Puntland cabuuris iyo digteytarnimo intaas lee hau ugu ekaato fadlan xiilka iska waareji Faroole walagu nacaay waaxba daan Puntland uma heysid waxaad aruursan laheyd waad aruursatay faqriiga kalaatag oo kaqaad faaqriga iyo culeyska iyo diib uudhaca aad kuwadiid shacabka puntland please am tired of you and your sonz
Noofember 29, 2012 at 3:39 pm
faadlan allsbc waxaan nikaaga coodsaneyna waarka xaaqiqadisa iin aad noso guudbisin malin walba ayaan websitkina soboqda oo aan aaqriya sii aan uu ogado waxaa kuso kordhay dagamada Puntland, waan daremaya iin pressure baadan nikasaran yahaay dhinaca dowlada oo aan suduwarku yahay idan uso gudbinkarin marka isku daya in aad xaaqiqda soodtabisin thank you.
baashi dheere says:
Noofember 29, 2012 at 6:02 pm
Puntland way hayaamtay,no one can stop to this journay
jago doon says:
Noofember 29, 2012 at 7:10 pm
Dr.Faroole is gambling with puntland state… wixi dhaca meeshuu kagalo ban kagalayaa
ahme farah says:
Noofember 29, 2012 at 7:40 pm
faroole waqtigiisii waa dhamaaday taas ha ogaado
Noofember 29, 2012 at 8:05 pm
Aad baan ugu faraxsanahay Madaxweynaha dawladda puntland sida loogu soo dhaweeyey Carmo iyo Boosaaso.
Maansha allaah Waan ku faraxsanahay , oo ku taageersanahay.
Noofember 29, 2012 at 9:31 pm
SBC- Waxaad tihiin muwaadiniin dhab oo reer Puntland ah.
Ha noqonina sida HRM-news iyo Puntlandnews24 oo noqday dayniilehii Puntland, kana shaqeeya isku dirka qabiilo walaalo ah iyo bur-burka Puntland, waxna uma dhimi karayaan!!!
Noofember 29, 2012 at 10:49 pm
faroole ma lagu kalsoonaankaraa nidaamkiisa xisbiyada
badan isagoo aad moodo xisbigiisa uu ku dhawaaqay xisbigii hantiwadaaga ahaa ee dawladda kacaanka kaas oo ahaa xisbi kaligiis ah oon lala tartami karin waxay ila tahay xisbiga farooalana sidaas yahay waayo waqtigan ayuuba ka dhigay xisbiga dalka haysta sida uu qaatay dastuurkii cusbaa ee awooda u siinayey madaxweynihii la soo doorto ansixinta ka dib inuu 5sano xilka hayo yaanan marna la aamini karin
Sacdiid Y says:
Noofember 30, 2012 at 2:41 am
Dadka waa ku daaleen dagaal iyo barkac. Maanta waxay joogta Puntland meel sare ah, oo ay xataa dunida aqoonsatay. Waa Ilaaheey mahadi
Waxaan leeyahay Madaxweyne ku soo dhawoow Boosaaso, waa dalkaaga, waxaana jooga dadkii aad madaxweynaha u aheyd
Laakiin kaga dhabee xisbiyada badan. Mar rabno 66 oday oo inta meel isku urursada cod baxsha.
BURHAN SAED SALAH says:
Noofember 30, 2012 at 12:12 pm
mansha allah waxaa muuqata in reer Puntland inay diyaar u yihiin inay ka gudbaan nidaamkii wax qaybsiga qabiilka loona gudbo nidaam dimuqraadi ah.
Noofember 30, 2012 at 12:26 pm
puntland waa socotay shacabka reer puntland hambalyo hambalyo aan kawada shaqayno horumarka iyo nabada puntland
Noofember 30, 2012 at 12:37 pm
been weeye xaalku wa xunyahay
Noofember 30, 2012 at 7:28 pm
in al igu daro ayaan aad u jaceladay fikar ka dhibashda sbc
ladan jamac says:
Diseenbar 1, 2012 at 12:36 pm
dadku kama dalan miyaa dabshidka kan shidana kama quusto miyaa dabqashada>>>>>>>>> puntland waxa jooga waa qabaa il isdhaldhalay waxa ladarisanaa waa lamid lkn ilahay ayanka magan galaynaa dabka ninka hurinyaa!!!!!!!!1
Janaayo 9, 2013 at 8:46 am
waxan aad ugu mahad celinaya warbahinta sbc
muhimada hadii an guda galo
dadka waxay jecel yihiin nin walba sida uu
rabo in ay wax udhacan wax macquul ahn ma noqonayso
kagudub madaxwaynaha haya xukuumada waxan amin sanahay
in aysan wali xilkiisi dhaman uuna sii wadan doono
run ahantiina wuxu na tusay wax badan oo dad waynaha daah
ka saarnaa mahadsanidiin